Dab-damiyaha 2021 ee ka soo horjeedka ajandaha ▷ ku cusbooneysii HALKAN! | Sameynta iyo daraasadaha
Ajendaha Ka Hortagga Dab-demiska
Inaad noqoto dab-damiye waxay ka dhigan tahay wax badan oo ka badan dabka oo aad la kulanto, maadaama aad hubin doonto nabadgelyada dadka iyo sidoo kale dhismooyinka, mararka qaarkoodna aad naftaada khatar gelinayso. Laakiin runtu waxay tahay inay leedahay faa iidooyin badan oo ay tahay boos joogto ah, nolosha. Hadaad rabto inaad ogaato wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u hesho booskaaga dab-demiye, halkan waxaan kuu sheegeynaa.
Nidaamka la cusbooneysiiyay ee imtixaannada dab-demiska
Hoos waxaad ka heli doontaa dhammaan qalab wax ku ool ah oo kaa caawin doona inaad diyaariso wicitaanka inaad u shaqeyso sidii Dab-demis. Ajandayaasha waa la cusboonaysiiyay waana la iibinayaa, markaa waad ka faa'iideysan kartaa dalabkan waqti kooban.
Intaa waxaa sii dheer waxaad ka heli doontaa ilo dheeri ah sida su'aalaha xulashada badan oo leh nuxurka manhajka guud iyo tijaabooyinka lagu diyaarinayo cilmu-nafsiga.
Ku baaq inaad diido shaqaalaha dab-demiska
Waa in la yiraahdaa nooca mucaaradka waa ismaamul. Marka dhowr bilood gudahood waxay ugu bixi kartaa beelaha qaar iyo kuwa soo socda, kuwo kala duwan. Taasi waa, way kala duwanaan kartaa markasta waana inaad u dhego nuglaataa ogeysiisyadooda. Sannadkan waxaa looga yeeray qaybo kala duwan oo juqraafiga Isbaanishka ah. Midkood waa La Rioja, oo ay jiraan 7 meelood oo loogu yeero, oo ka socda Kooxda C. Waqtiga kama dambaysta ah ee codsiyadu waa 11/09/08 ilaa 10/2018 XNUMX. Haddii aad rabto inaad ogaato faahfaahin dheeri ah ee wicitaanka hadda, waxaan kuu daayeynaa dukumiintiga rasmiga ah.
Shuruudaha looga baahan yahay dab-demiska
Ha Dhalashada Isbaanishka. In kasta oo muwaadiniinta Dawladaha Xubnaha ka ah Midowga Yurub ay iyaguna ka qayb geli karaan.
Ka weyn 16 sano oo aanu dhaafin da'da hawlgabka ugu badan.
Lahaanshaha mid ka mid ah shahaadooyinka soo socda: Bachelor, Takhasusle Takhasusle, Farsamayaqaan Sare, Wareegga Tababbarka Heerka Sare, ama wixii u dhigma. Xusuusnow waqtigan in shuruudaha ay kala duwanaan karaan iyadoo kuxiran jagooyinka la bixiyay. Maaddaama ay awoodi doonaan inay codsadaan shahaadooyin sare haddii loo tixgeliyo si ay u fuliyaan booska gaarka ah.
Uma xanuunsanayo cudur ama cillad ka hortageysa waxqabadka shaqooyinka. Waa inaad keentaa caddeyn caafimaad, oo uu soo saaray GP-gaaga, taas oo muujineysa tan.
Aan laga soocin mid ka mid ah Maamulada Dadweynaha, iyada oo loo marayo dacwadaha edbinta.
Joog haysashada laysanka B, C + E. (Kan dambe ayaa badanaa la codsadaa markay timaado meel darawal dab-damis)
Sida loo diiwaan geliyo imtixaannada dabka
Si loo soo gudbiyo codsiyada, codsadayaashu waa inay buuxiyaan shuruudaha kor lagu soo sheegay. Ku iska qor tartamada la dagaalanka dabka Waa inaad buuxisaa codsiyada ka muuqda lifaaqyada wicitaanka. Midkood wuxuu noqon doonaa midka laxiriira daboolida xogta. Halka kuwa soo socdaa ay noqon doonaan mudnaanta in la qiimeeyo. Inkasta oo tan dambe la soo bandhigi karo illaa shan maalmood ka dib marka la ogaado natiijada baaritaanka qalinka ee mucaaradka. Laakiin dhib malahan in la weydiiyo goorta aan helno arjiga la daboolay. Marka wicitaanka la daabaco, waxaad heli doontaa 20 maalmood oo shaqo si aad isaga diiwaangeliso mucaaradka.
La khidmadda bixintaSidoo kale way kala duwanaan kartaa laakiin waxay noqon doontaa qiyaastii 30,18 euro, sidii ay ahayd wicitaankii ugu dambeeyay ee Kooxda C. Lacagta waxaa lagu bixin doonaa lambarka koontada ee lagu bixin doono daabacaadda wicitaanka. Marka muddadu dhammaato, liisaska kuwa la aqbalay iyo kuwa aan la aqbalin ayaa la daabici doonaa. Sabab looga saarayo, waxaa laga yaabaa inayna lacagta bixin ama soo gudbin arjiyada muddadii loogu talagalay.
Imtixaanada mucaaradka dab-demiska
Layliga ugu horeeya: Qaybta afkaarta
Marxaladda I: Ka jawaab su'aalo ku saabsan qaybta sharci-dejinta iyo sidoo kale ajandaha guud. Qeybtaan waxaad kuheleysaa saacad iyo bar.
Wejiga II: Ka jawaab su aalaha ku saabsan sharciga gaarka ah ee bulshada ama gobolka aan u soo bandhigno nafteena.
Layli labaad: Imtixaanno jidheed
Fuula xadhig siman: Codsaduhu waa inuu fuulaa xadhig siman oo 5 m ah. Ka bilaabanaya booska fadhiga. Waxaad yeelan doontaa laba isku day oo aad ku gaarto gambaleelka ku yaal xagga sare ee xarigga. Waqtiga ugu badan waa 15 sekan.
Riixitaanno go'an oo go'an: Garka waa inuu ka gudbaa cidhifka baarka. Markaas waxay geli doontaa ganaax laakiin is rogrogmada.
Boodo taagan: Lugaha ayaa loo jajabnaan doonaa si ay u soo boodaan laakiin cagaha dhulka lama kala goyn karo ka hor boodka. Boodka ayaa lagu dhawaaqi karaa inuu madhan yahay haddii aadan ku dhicin lugahaaga oo fidsan.
Culays qaadista: Waxaad ka bilaabi doontaa booska boogaha ee hoose, kursiga keydka, waxaad kor u qaadi doontaa baarka leh 40 kg, tirada ugu badan waqtiyada, 60 ilbiriqsi.
3000 mitir orod: Waxaad ku safri doontaa masaafadan wado yar oo waddo bilaash ah.
Dabaasha 50 mitir xur ah.
Baadhitaanka Miisaanka: Waxay noqon doontaa fuulitaan bilaash ah wiishka dhererkiisu yahay 20 mitir.
Layli saddexaad: Cilmi-nafsiyadeed
In kasta oo ay tahay qayb qasab ah, haddana ma noqon doonaan kuwa baabi'iya.
Layli afaraad: Baadhitaanka caafimaadka
Si fudud loo xaqiijiyo in codsaduhu ku jiro xaalad caafimaad iyo mid jireed si uu u awoodo inuu qabto booska la xushay.
Sidee imtixaanku yahay
Sidii aan ku soo sheegnay qaybtii hore, imtixaanku wuxuu ka kooban yahay qayb teori ah, oo lagu dabakho fikradaha la soo bartay. Qaybta kale ee ugu muhiimsan waa caddaynta jirka. Maaddaama iyaga lagu qiyaaso awoodda jirka kore iyo kan hoose, iyo sidoo kale muruqyada pectoral ama iska caabbinta iyo sahlanaanta biyaha. Waxaa sidoo kale jira tababar qaab cilmi-nafsiyeed iyo ugu dambeyn, baaritaan caafimaad.
Layliga ugu horeeya, ama qeybta teori, waa inaad ka heshaa ugu yaraan 5 mid kasta oo ka mid ah wejigiisa si aan loo baabi’in. Haddii aad gaartid calaamaddan, waxaad u gudbi doontaa imtixaannada jirka. Si aad uga guuleysan karto iyaga, waa inaad sidoo kale gudbisaa sumadda loo baahan yahay. Dhibcaha qayb kasta waa lagu dari doonaa natiijada ugu dambeysana waxaa loo qaybinayaa 5. Tan ugu horeysa, fuula xadhigga iyo imtixaanka kor u qaadista halkan ma soo galaan, maxaa yeelay waa in la gudbiyaa.
Layliga saddexaad, cilmi-nafsiga, waxaa lagu kala saari doonaa 0 ilaa 5 dhibcood. Halka aqoonsiga lagu qiimeyn doono inay yihiin Apt iyo not Apt. Markaad ka gudubto dhammaan qaybahaas, waxaad gaari doontaa wejiga tartanka. Ma aha mid meesha ka saareysa waana mid si fudud u ah dhammaan mudnaanta sida shaqooyinka la xiriira jagada la doonayo ama koorsooyinka rasmiga ah ee badbaadinta ama ilaalinta madaniga, iyo kuwo kale. Dhamaantood waxay ka muuqan doonaan dukumiintiga wicitaanka.
Sida imtixaannada tartamada badankood, waxaan ka heli doonnaa ajande guud iyo mid gaar ah oo loogu talagalay jagooyinka kala duwan ee aan dalbanno. Dhinaca kale, waxaa sidoo kale jiri doona qaybta sharciga ee gobolka ama bulshada aan u bandhigno nafteena. Had iyo jeer waxay ka muuqan doontaa wicitaanka.
Mawduuca 1. Shuruucda la xidhiidha is-ilaalinta iyo ka-hortagga dabka: Xeerka Dhismaha Farsamada. Dukumentiga Aasaasiga ah (SI). Amniga haddii dab dhaco. Xeerka rakibaadda ka hortagga dabka. Xeerka badbaadada dabka ee xarumaha warshadaha.
Mawduuca 2. Kiimikada dabka. Hordhac. Saddex-xagal iyo tetrahedron dabka. Gubashada ololka. Gubasho aan olol lahayn. Shidaal. Shidaal. Tamarta waxqabadka .. Falcelinta silsiladda. Alaabooyinka ka dhashay dabka. Horumarinta dabka. Faafida dabka. Kala soocidda dabka.
Mawduuca 3. Shidaal. Hordhac. Noocyada shidaalka. Waxyaabaha shidaalka: Qiimaha kaloloriinta, falcelinta, halabuurka, iskudhiska, cufnaanta, barta dabka, barta barta tooska ah, barta dabka otomaatiga, birta iyo dhibcaha qarxa, heerka falcelinta. Noocyada dabka.
Mawduuca 4. Sunta waxyaabaha ka dhasha dab.
Mawduuca 5. Hababka bakhtiinta. Qaboojinta, neef qabatinka, niyad-jabinta, xakamaynta.
Mawduuca 6. Wakiilada bakhtiinta Biyaha: Hordhac, guryaha kiimikaad-kiimikaad, bakhtiinta guryaha, farsamooyinka bakhtiiyeyaasha, waranlada adeegyada dabka, hababka loo adeegsado, xaddidaadda iyo taxaddarrada isticmaalkooda, wax lagu daro
Mawduuca 7. Daminta warbaahinta. Hoosyada, kala soocidda, sifooyinka, gaadiidka tuubada iyo meelaynta, dayactirka. Qaybaha ururada, rakibida, adapters, fargeetooyinka, hoos udhaca. Waranka, noocyada warmaha, adeegsiga, kaabayaasha. Qalabka kale ee loo isticmaalo daminta.
Mawduuca 8. Wakiilada bakhtiinta Wakiilada deminta adag. Wakiilada daminta gaaska.
Mawduuca 9. Haydarooliga. Hordhac. Haydarooliga, Hydrostatic. Hydrodynamics. Cufnaanta iyo culeyska gaarka ah. Cadaadis. Culays lumis. Isleeg dheecaan ah. Falcelinta xoogga Bamka Haydarooliga. Noocyada bambooyin. Phenomena la xidhiidha isticmaalka bambooyin.
Mawduuca 10. Horumarinta dabka gudaha: Horumarinta dabka qol gudahood, Horumarka dabka qolka hawo / dabeecad leh, Horumarka dabka ee qolka / dabeecada aan hawo lahayn, kaas oo hawo la marinayo mar dambe, astaamaha iyo astaamaha dillaaca, astaamaha iyo astaamaha dib u dhac, shaxda socodka horumarka dabka. Farsamooyinka la dagaalanka dabka gudaha. Daminta biyaha, farsamooyinka la bakhtiiyo, hababka la bakhtiiyo, habka weerarka, daminta xumbada. Nidaamyada wax ka qabashada dabka meelaha xiran. Qalabka iyo khadadka weerarka, hababka amniga. Dhaqdhaqaaqa iyo kala guurka, soo dhaweynta - xaqiijinta tilmaamaha hogaamiyaha kooxda, xaalad deg deg ah oo ku timid hal ama in ka badan dab-demiyeyaal.
Mawduuca 11. Xumbo, noocyo xumbo ah iyadoo loo eegayo asal ahaan ama qaab dhismeedkooda. Bakhtiinta guryaha. Kala soocida iyadoo loo eegayo xumbada xoogga. Shuruudaha aasaasiga ah ee loogu talagalay xulashada xajmiga xumbada. Astaamaha ugu waaweyn ee xumbo jirka ah iyo xumbooyinka. Xeerarka Isbaanishka ee baabuurta ee saameeya waxyaabaha ku jira qalabka xumbada. Adeegsiga xumbada booqashooyinka iyo banaanbaxyada.
Mawduuca 12. Kala soocida qalabka xumbada. Nidaamyada iyo farsamooyinka sameynta noocyada kala duwan ee xumbada jirka. Xulashada qalabka dalabka. Siyaabaha loo mariyo xumbada.
Mawduuca 13. Hawiyaha hawleed ee dabka: ujeedada hawo qaadashada. Hababka hawo-qaadista. Mabaadi'da hawo-qaadista. Xeeladaha hawo qaadista. Nidaamyada loo adeegsado hawo-siinta taatikada xeeladeysan.
Mawduuca 14. Dabka kaynta. Qeexida dabka kaymaha iyo sharciga gobolka ee khuseeya. Waxyaabaha faafinta. Noocyada dabka Foomamka iyo qaybo ka mid ah dabka kaynta. Hababka bakhtiinta. Qalabka farsamada iyo aaladaha gacanta ee daminta dabka kaynta. Xeerarka guud ee badbaadada.
Mawduuca 15. Kala soocid. Hordhac. Qalabka loo isticmaalo badbaadinta shilalka taraafikada. Qaybaha ama walxaha gaariga si loo tixgeliyo badbaadinta. Farogelinta shilalka taraafikada. Badbaadada ka-hortagga.
Mawduuca 16. Qalabka badbaadinta iyo daadgureynta. Hordhac. Jookar, gacan qaad ama jaranjarooyin sudhan. Sallaan la dheereyn karo Sallaan elektarooniga ah Sallaan xarig. Soo degitaanka daadgureynta. Hoos ama gacmo daadgureyn Joodariyaasha hawada. Jaranjarooyinka otomaatiga ah iyo hubka gacmaha.
Mawduuca 17. Aqoonsiga walxaha halista ah Hordhac. Shuruucda qatarta leh Xeerarka tixraacaya alaabada halista ah Qeybinta guud ee badeecadaha halista ah. Hababka aqoonsiga.
Mawduuca 18. Farogelinta shilalka badeecadaha halista ah. Hordhac. Heerarka ilaalinta. Sifooyinka gaarka ah ee heerka III ku habboon. Farogelinta shilalka badeecadaha halista ah. Mabaadi'da aasaasiga ah ee waxqabadka.
Mawduuca 19. Dhismo .Hordhac. Dhismaha: Qaab dhismeedka. Qalabka loo isticmaalo dhismaha.
Mawduuca 20. Dhaawacyo wax dhisaya. Hordhac Shuruudaha la qabsiga ee dhismuhu waa inuu buuxiyaa. Xaalad wax dhisaysa. Xamuul ku xardhan dhisme Dhaawacyo ka soo gaadhay dhismayaasha Muujinta cudurada. Hababka xakamaynta Crack. Wejiyada burburka dhismaha iyo tallaabooyinka sixitaanka. Dhul go '. Xeebta iyo xeebta Nidaamka soo dhaca iyadoo loo eegayo curiyaha dhaawacmay. Xaraashka Adeegyada shoring
Mawduuca 21. Aasaaska nolosha. Neefsashada wadnaha. Waxqabadka nabarrada, dhiigbaxa, goynta, Naxdinta, gubashada, jabka, kala-baxa, murgacashada, dhaawacyada isha. Dhaqdhaqaaqa, abaabulidda booska amniga iyo dhaawaca dambe. Waxqabadka fayadhowrka ee dabka dhismaha.
Mawduuca 22. Gaadiidka dab damiska. Hordhac. Gaadiidka dab damiska iyo adeegyada kaabayaasha ah. Heerka Yurub 1846. Heerka. Dab damiska iyo badbaadinta gawaarida. Heerka UNE 23900 iyo soo socda. Astaamaha aasaasiga ah ee bambooyin biyood. Heerka UNEEN 1028-2: 2003 + A1: 2008.
Mawduuca 23. Qalabka ilaalinta shakhsi ahaaneed: Xeerarka looga hortagayo halista shaqooyinka iyo qalabka ilaalinta shakhsi ahaaneed. Ilaalinta shaqsiga. Kala soocida Epis. Qalabka ka hortagga dabka. Dharka kiimikada difaaca.
Mawduuca 24. Sharciga 31/1995, ee Noofambar 8, ee ka hortagga Khataraha Shaqada. Xeerka Boqortooyada ee 773/1997 ee Maajo 30, oo ku saabsan ugu yaraan qodobbada caafimaadka iyo nabadgelyada ee la xiriira adeegsiga shaqaalaha qalabka ilaalinta shakhsi ahaaneed.
Mawduuca 25. Ilaalinta neefsashada. Hordhac. Ilaalinta neefsashada. Khataraha neefsashada. Khataraha neefsashada Qalabka difaaca neefsashada. Kooxaha ku tiirsan warbaahinta. Kooxo ka madax banaan deegaanka.
Mawduuca 26. Isgaarsiinta xaaladaha degdegga ah. Nidaamka isgaarsiinta, canaasiirta habka wada hadalka. Isgaarsiinta. Isgaarsiinta.
Mawduuca 27. Korontada. Hordhac. Qeexitaanka korontada. Shuruucda iyo qaaciidooyinka aasaasiga ah ee wareegyada korantada. Ku rakibida korantada danab sare iyo hoose. Xarumaha macaamiisha. Saamaynta korontadu ku leedahay jidhka bini'aadamka. Xeerarka danab hoose ee korantada.
Mawduuca 28. Makaanik. Hordhac. Mashiinka afar-cirifka ah. Nidaamyada qaybinta. Nidaamka Kicin. nidaamka shidaalka ee matoorada gubida gudaha. nidaamka saliidaynta. nidaamka qaboojiyaha. nidaamka bareeg Aasaaska farsamada. Mashiinka naaftada.
Maxay yihiin shaqooyinka dab-demiska
Sidii aan ku sheegnay bilowgii, howlaha dab-demiyeyaashu way badan karaan marka laga reebo kuwa aan maskaxda ku hayno.
Waa run in tani ay tahay fikradda ugu caansan ee aan u qabno dab-damiye. Laakiin waa run in mucaaradka dhexdiisa ay sidoo kale jiraan xilal iyo xilal kale oo ay qabtaan. Naciimo Dab damiska waxaa diirada lagu saari karaa keymaha ama meelaha cagaaran iyo waliba magaalooyinka.
Siidaynta ama sii deynta dadka ama xoolaha
Tani waxay muujineysaa marka laga reebo daminta dabka, inay iyaguna caawinayaan samatabixi dadka iyo duunyadaba kuwaas oo ku xayiran khataro kala duwan. Waxay awalba noqon karaan khataro ka dhasha dabka sida taraafikada ama shilalka tareenka, iwm.
Waa la dhihi karaa waa mid ka mid ah howlaha ugu murugsan ee dab-damiye la kulmi karo. Tan iyo markii daadgureynta guryaha daad ama gaas oo daadanaya awgood inuu burburo. Waxay noqon karaan labadaba dibedda iyo gudaha.
Xaaladaha degdegga ah ee alaabada khatarta ah
Ma noqon karto mid ka mid ah shaqooyinka badanaa soo noqnoqda waa inay qabtaan, laakiin mararka qaarkood waa loo baahan yahay. In alaabada halista ah la xakameeyo sidoo kale waa qeyb ka mid ah howlaha ay xirfadlayaashani qaban karaan, tusaale ahaan, marka ay daadanayaan walxo sun ah ama ololi kara.
Xaaladaha degdega ah ee yar
Waxaan ka wada hadalnay shaqooyinka baaxadda leh ee ay dab-damisku inta badan qabtaan. Laakiin sidoo kale waa run inay jiraan kuwo kale sida xaaladaha degdegga ah ee yar yar. Waxay noqon karaan shaqada ka hortagga, dabab yaryar ama xayawaan xayirmay.